YEYINTNGE(CANADA): Monday, December 13
13 Dec 2010 ဒိုင်ယာရီ
12_Dec_from_DS_to_Norway Myanmar committee_.pdf
13 dec 2010 yeyintnge's diary.doc
2417K View Download
13 dec 2010 yeyintnge's diary.pdf
4026K View Download
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/13/20100အကြံပြုခြင်း
မနေ့က နေ့လယ်ခင်းက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ၁၆ ဖွဲ့နဲ့ တယ်လီဖုန်းကတဆင့် တိုက်ရိုက် မေးမြန်းဆွေးနွေးခန်းမှာ ဒုတိယပင်လုံ သဘောထားရပ်တည်ချက်၊ တပ်မတော်အခန်းကဏ္ဍ စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ဖြေကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီ ဒုတိယပင်လုံ ကိစ္စကို စပြီးတော့ လုပ်နေပါတယ်။ စပြီးတော့ လုပ်တဲ့အခါမှာ အန်တီတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ထင်ရှားအောင်လို့ ပထမဦးဆုံး လုပ်ရမှာပါ။ စောစောက ပြောခဲ့သလိုပဲ ဒုတိယပင်လုံအတွက် အကြီးဆုံး ပြဿနာက နားလည်မှု လွဲမှားနေခြင်းပဲ။ ဒုတိယပင်လုံကို ဒါ သက်သက်စိမ်ခေါ်တာ၊ ဒါဟာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု လမ်းကို သွားတာ၊ အဲဒီလိုမျိုးတွေ ပြောနေတာကို အန်တီတို့က ဒါ မဟုတ်ပါဘူးလို့ သေချာ ရှင်းလင်းအောင်လို့ လုပ်ရမှာ ဒါ ပထမခြေလှမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ ဒုတိယပင်လုံ၊ ၂၁ ရာစုနှစ် ပင်လုံ ဆိုတာဟာ စင်ပြိုင်အစိုးရလည်း မဟုတ်ဘူး၊ စင်ပြိုင်လွှတ်တော်လည်း မဟုတ်ဘူး၊ စင်ပြိုင်ညီလာခံလည်း မဟုတ်ဘူး၊ စင်ပြိုင် ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်မယ့် စုစည်းမှုတခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တပ်မတော်ကရော၊ တခြား အစုအဖွဲ့တွေကရော နားလည်အောင် အန်တီတို့ ကြိုးစားရမှာ ဒါက ပထမအဆင့်ပါ။ အဲဒီလို နားလည်မှု ရသွားပြီဆိုမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အတွက် အန်တို့ ဆက်ပြီး ကြိုးစားရမှာပါ”
ဒီအစီအစဉ်မှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ကိုလည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲမှာ နယ်စပ်မှာ ထွက်ပြေးနေရတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေအပေါ် ဘယ်လို ကူညီ ဖြေရှင်းနိုင်မလဲ၊ နယ်စပ်က လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ အကြောင်းနဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ အခြေအနေ ရှိမရှိ စတာတွေကို အဓိကထား မေးမြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေအကြား သဘောထားကွဲလွဲပြီး အဖွဲ့အစည်း ကွဲတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းတာကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကိုယ် လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို ကိုယ်အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိရင် အခက်အခဲတွေကို အကွဲအပြဲ မရှိဘဲနဲ့ ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။ အန်တီတို့ဆိုရင်လည်း အန်တီတို့အဖွဲ့ထဲမှာ အကွဲအပြဲတွေကို ကျော်လွှားခဲ့ရတာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အန်တီတို့က ကွဲချင်ပြဲချင်လို့ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ အဲန်အယ်လ်ဒီဟာ အခုထက်ထိ နိုင်ငံရေးအင်အားစုကြီး တခုအနေနဲ့ ရပ်တည်နိုင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ကွဲသွားပြဲသွားချင်တဲ့ လူတွေကလည်း ရှိတာကိုး။ အဲဒီတော့ ကွဲတယ်ပြဲတယ် ဆိုတာ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်နဲ့ ဆိုင်တယ်။ အန်တီတို့ကတော့ ဆက်ပြီး ကြိုးစားသွားမှာပဲ”
ဒီ လန်ဒန်ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်အခြေစိုက် RFA သတင်းထောက် မအေးနှင်းညို သတင်း ပေးပို့ထားတာကိုလည်း အပြည့်အစုံ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုအေးကြည် ဈာပနအခမ်းအနား (မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ)
Myanmar Development Committee-MDC ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် နှင့်
မြန်မာနိုင်ငံ လယ်သမား အလုပ်သမား သမဂ္ဂဖော်ဆောင်ရေး ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ
ဦးအေးကြည်အား ၁၉၅၄ တွင် အဘ ဦးချစ်တီးနှင့် အမိ ဒေါ်လှငြိမ်းတို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်း (၅) ယောက်တွင် အကြီးဆုံးသားဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် တိုင်းပြည် နှင့် အမျိုးသားရေး ဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းမှုများအပေါ်တွင် စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးတွင် ရှေ့တန်းမှရဲဝံ့စွာပါဝင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၉ တွင် စစ်အုပ်စု၏ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကို ခံရပြီး ၁၉၉၀ တွင် ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် အပြစ် ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၅ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ထောင်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏မ လျှော့သော ဒီမိုကရေစီရေးကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် မကြာခဏဆိုသလို စစ်အုပ်စု ၏ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။
ထိုသို့သောအခြေအနေများကြောင့် ၎င်း၏မိသားစုနှင့်ပင်ကွဲခဲ့ရပြီး သေဆုံးချိန်တွင် ဇနီး နှင့် သားသမီး ၅ ယောက် ကျန်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ဇနီးက မိသားစုတာဝန်များအကြောင်း ပြောတိုင်း မိမိကလေးများ၏ ရှေ့ရေးထက် တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ အခြားကလေးများအတွက် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇနီးသည်ကိုပြောပြီး မိသားစု၏ အစွန့်ပစ်ခံဘ၀ ဖြင့် နိုင်ငံရေးကို ဘ၀တလျှောက်လုံးပေးဆပ်ကာ လုပ်ဆောင်သွားခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၇ ဇန်န၀ါရီလတွင် အမ်ဒီစီ (Myanmar development committee ) ဖွဲ့ရာတွင် ပါ ၀င်ခဲ့ ပြီး ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ သိမ်ကြီးဈေးရှေ့ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြ ပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့သောကြောင့် စစ်အုပ်စု၏နောက်တကြိမ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခံခဲ့ ရပါသည်။ ထိုစဉ်က မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးလိုလားသူများအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုခဲ့ သော အချက်များမှာ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးအပါအ၀င် တောင်းဆိုချက် ၁၇ ချက် ပါ ၀င်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးသမားဘ၀တလျှောက်လုံးတွင် ပေးဆပ်မှုများစွာရှိခဲ့ပြီး ရိုးသားမှုအ ပြည့်ရှိသော ရဲဘော်တဦးလည်းဖြစ်ပါ သည်။ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ ၀င်ဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီး ထောင်တွင်းနေ ထိုင်စဉ်ကာလများတွင်လည်း ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ရင်းနီးသောသူတဦး လည်းဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ နံနက် ၆း၃၀ တွင် ၎င်းနေထိုင်ရာ အမှတ် ၂၇၈ အာသာဝတီလမ်းမကြီး မြောက်ဥက္ကလာနေအိမ်တွင် ရေဒီယိုမှ ဘီဘီစီ အာရ်အက်ဖ်အေ သတင်းနား ထောင်နေရင်းမှ ရုတ်တရက် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီး ကွယ်လွန်ကျဆုံး သွားခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားလူငယ် ဆုံညီ ပွဲတော်အဖွင့် အမှာစကား ဒေါ်စု ပြောကြား
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ညီညွတ်ရေးနဲ့ လူမှုအသွင်ကူးပြောင်းမှု စတာတွေ အားလုံးဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့လည်း မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ ကျမတို့ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲချင်သလို လူငယ်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာကို သူတို့ပြောင်းလဲချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်ထိ ဘယ်နေရာမှ အပြောင်းအလဲ မဖြစ်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အခြေခံတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ လူငယ်တွေနဲ့ ကျမတို့ နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်။ မျိုးဆက်ကွာခြားမှုဆိုတဲ့ အားနည်းချက် မရှိသင့်ပါဘူး လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ကို သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေလို သဘောထားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းဖို့အတွက် ကမ္ဘာတဝန်းက လူငယ်တွေရဲ့ အကူအညီတွေကို ကျမတို့ အများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျမတို့ဆီကို ဆက်သွယ်နိုင်မဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ လူငယ်ကျောင်းသားများ ပွဲတော်အခမ်းအနားကို မနေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိန့်ခွန်းနဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ကနေ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲတော်ကို လေးနှစ်တကြိမ် World Federation of Democratic Youth ကဦးစီးကျင်းပတာဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၅ နိုင်ငံက ကိုယ်စားလှယ် သုံးသောင်းလောက် တက်ရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ အိန္ဒိယအခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော်ကျော်သန်း တက်ရောက်နေပါတယ်။
By ရော်နီညိမ်း တနင်္ဂနွေ, 12 ဒီဇင်ဘာ 2010
တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား (၀၃၈)
မြန်မာစစ်အစိုးရမှာ ‘အဏုမြူလက်နက်တွေထုတ်လုပ်မယ့် နျူးကလီးယားစီမံကိန်း’ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတချို့ကို ယူဆောင်ပြီး၊ ပြည်ပကိုထွက်ခွါလာခဲ့သူကတော့ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ စစ်အင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးဟောင်း စိုင်းသိန်းဝင်းပါ။ တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် DSTA ဗိုလ်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၁) က ကျောင်းဆင်းခဲ့ပြီးတော့၊ ရုရှနိုင်ငံမှာ ဒုံးကျည်ဆိုင်ရာ စက်မှုလက်မှု ဘာသာရပ်နဲ့ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ရယူခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးဟောင်း စိုင်းသိန်းဝင်းရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို ဒီသီတင်းပတ် ရဲ့ “တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား” အပတ်စဉ်ကဏ္ဍမှာ ဦးရော်နီညိမ်းက စီစဉ် တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဗိုလ်မှူး စိုင်းသိန်းဝင်းခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ တပ်ကို ကျနော်တို့ ကို အရင်ဆုံး ပြောပြပေးပါ ခင်ဗျာ။
ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် အမှတ်(၁) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး အလုပ်ရုံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကပစ နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ သူက “တပ်မတော် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဌာနချုပ်” ရဲ့ လက်အောက်ခံ တပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်း။ ။ ဌာနချုပ်မှူး လို့ ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျ။ တပ်မတော်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဌာနချုပ်၊ ဌာနချုပ်မှူး ပါခင်ဗျ။
ဗိုလ်မှူး စိုင်းသိန်းဝင်း။ ။ ဆိုလိုတာက ‘မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်ကြီးများသုတေသနဌာန’ တပ်မတော်(ကြည်း) အတွက်၊ တပ်မ တော်(ရေ) အတွက်၊ တပ်မတော်(လေ) အတွက်၊ ဆိုပြီးတော့ အဲဒီလိုမျိုး ခွဲထားတဲ့ ဌာနပါ။ အဲဒီမှာ မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေထဲမှာ rocket ပါတယ်။ နျူကလီးယားပါတယ်။ နောက် ဌာနတစ်ခုဆိုရင် main frame computer တည်ဆောက်ဖို့ပေါ့။ အဲဒီလို research ဌာနတွေ ကိုပါ ထည့်ပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုလို့ရှိရင်တော့၊ ကျနော်တို့ ရုရှကို သွားကတည်းကိုက ကျနော်တို့ သင်ရတဲ့ ဘာသာရပ်တွေက၊ rocket နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေ nuclear reactor တည်ဆောက်မှုနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေချည့်ပဲ တက်ရပါ တယ်။ ကျောင်းတော့ ကွဲသွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တက်ရတဲ့ subject တွေက အတူတူပဲ။ ဥပမာ ကျနော် Bauman (Bauman Moscow State Technical University) တက္ကသိုလ်မှာ ကျနော်က rocket engine design နဲ့ တက်တယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ Bauman တက္ကသိုလ်မှာ ပဲ၊ တချို့ကျောင်းသားတွေက ဒုံးပျံနည်းပညာကို တက်တယ်။ တချို့က nuclear reactor engineering ကိုတက်တယ်။ အဲဒီ တချိန်တည်းမှာ ပဲ Russia Chemical University (D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia – MUCTR ဟုလည်းခေါ် သည်။ ၁၈၆၉ မှာ Periodic Tableကို တီထွင်သူ ရုရှသိပံ္ပပညာရှင် Dmitri Mendeleyev ကို ဂုဏ်ပြုတည်ထောင်ထားသော တက္ကသိုလ်) ကျနော့်သူငယ်ချင်း တချို့ကကျတော့ ဒုံးပျံလောင်စာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ subject တွေ သင်နေရတယ်။ ကျနော်တို့က mechanical engineer ဖြစ်တဲ့အတွက် rocket ဘာသာရပ်တက်ရတယ်။ nuclear ဘာသာရပ် တက်ရတယ်။ Chemical Engineering နဲ့ ဘွဲ့ရထားတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေကျတော့၊ ဒုံးပျံလောင်စာတို့ nuclear နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ လေ့လာရပါတယ်။
အကြောင်းအရာ။ ။ တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သည်းညည်းခံနိုင်စိတ် ကုန်လာခြင်း။
လျှို့ဝှက် မှတ်တမ်းဖြည့်သွင်းသူ။ ။ ယာယီသံရုံး တာဝန်ခံ ရှီလာ ဗယ်လာရိုဆာ၊ အကြောင်းပြချက် 1.4 (b) & (d)
၁။ (ဂ) အနှစ်ချုပ်။
သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံက တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးကို ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်က နေ့လယ်စာဖိတ်ပါသည်။ (မြန်မာနိုင်ငံတွင်) နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများ ကင်းမဲ့နေခြင်းနှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို နိုင်ငံအားလုံးက တသံတည်းဖြင့် စတင် စကားပြောလာစေရန် တိုက်တွန်းရန်၊ လေးဖင့်နေမှုများ အဆုံးသတ်ရန် ကိစ္စ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ တရုတ်သံအမတ်က မြန်မာစစ်အစိုးရကို ကာကွယ်ပြောဆိုရန် မကြိုးပမ်းတော့ပါ။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက ဆိုးနေသည့် အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေရန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပြော သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အခွင့်အလမ်းများကိုသုံး၍ အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာရန် တိုက် တွန်းခဲ့သော်လည်း မြင်သာသည့် ရလဒ်များစွာ မရခဲ့ပါ။ သို့သော်လည်း မိမိတို့နှင့်အတူ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရေး လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိပါသေးသည်။ သံအမတ်ကြီးက အာဏာနှင့် စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်များ ဆုံးရှုံးသွားမည်ကို စိုးရိမ်နေမှုက စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ စကားဝိုင်းနှင့် ဝေးနေစေသည်ဟု ဆိုသည်။ အကျဉ်းချုပ်-ဆုံး။
၂။ (ဂ) သံအမတ်ကြီး ဂွမ် မူ (Guan Mu) က နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ တိုးတက်မှု မရှိခြင်းအပေါ် စစ်အစိုးရကို ကာကွယ်ရန် မကြိုးပမ်းတော့ပါ။ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ရပ်ဆိုင်းသွားရသည်ကို မသိကြောင်း သူ ဝန်ခံပါသည်။ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ပြင်ပကမ္ဘာသို့ သူတို့တံခါးဖွင့်ရမည်ကို နားလည်သည်ဟု သူက ဖြည့်စွက်ပြောသည်။ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းများ အထက်သို့ မရောက်ကြောင်း လည်းဆိုသည်။ သံဃာများ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမဆန်လှကြောင်း ပြောသော်လည်း ဂွမ်က သံဃာများပါဝင်လာရခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေဆိုးနေ၍ ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံရန် တာဝန်ပေးခန့်ထားသည့် ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိက ၂-လ ကြာပြီးမှ လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က တွေ့ဆုံကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုပြီး ကွာဟမှု "သိပ်ကြာနေကြောင်း" ဝန်ခံပြောဆိုသည်။ တာဝန်ခံက ထောက်ပြရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသည် ရှေ့ဆက်ရမည့်ခရီးတွင် တကယ့်အဟန့်အတားဖြစ်နေကြောင်း ပြောသည်။ သံအမတ်ကြီးက ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအနေဖြင့် လာမည့်နှစ်များတွင် ပို၍ တံခါးဖွင့်ရန်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း တုံ့ပြန်ပြောဆိုသည်။ မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့် ဤမျှကြာမြင့်စွာ မစောင့်နိုင်ပါဟု တာဝန်ခံက သတိပေး ပြောဆိုပြီး နောက်ထပ်အချိန်ဆွဲမှုများ ဖြစ်နေပါက မငြိမ်မသက်ဆူပူမှုများ ပို၍ ဖြစ်စေရန်သာ ရှိသည်ဟု ထောက်ပြသည်။
၃။ (ဂ) သံအမတ်ကြီး ဂွမ်က ပြောရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ကြသည့် တရုတ်အရာရှိများက ထိပ်တန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အရှိန်မြှင့်ရန် တိုက်တွန်းကြကြောင်းနှင့် နောက်ပြန်ဆုတ် မှုကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ လက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ကြသည်။ သူက သဘောတူညီ သည်မှာ အင်အားစုအသီးသီးက စ၍ စကားပြောဆိုသင့်ပြီး မိမိတို့အနေဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သည့် ဝေဖန်ချက်များ လုပ်ရန် တိုက်တွန်းသည်။ တာဝန်ခံက ပြောရာတွင် "စတင်စကားပြောရန်" ဆိုသည်မှာ အလွန်အပြုသဘောဆောင်သည့် အကြံပြုချက်ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ် ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပါက ကမ္ဘာက ကြို ဆိုကြမည်သာ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအနေဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပေါ် လေးနက်ပါက နေ့စဉ်တွေ့ဆုံ စကားပြောနေသင့်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာမက တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ အခြား စိတ်ပါဝင်စားသူ နိုင်ငံသားများနှင့်လည်း ပြောဆိုဆွေးနွေးနေသင့်သည်ဟု ပြောသည်။ လူတဦးနှင့် ၂-လကြာပြီးမှ တနာရီကြာ တခါ ဆွေးနွေးသည်မှာ ဟန်ပြသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မလေးနက်ကြောင်း တာဝန်ခံက ပြောသည်။ ထို့ပြင် စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အခြားမည်သူနှင့်မျှ တွေ့ခွင့် မပေးကြောင်း၊ စစ်အစိုးရ သူ့အပေါ် သက်ညှာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါက လူအမျိုးမျိုးထံမှ အကြံဉာဏ်များ တိုင်ပင်ရယူနိုင်မည် ဟု သူကဆိုသည်။
၄။ (ဂ) ဂွမ်က နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ မစတင်နိုင်ရခြင်း ကြောင့်ကြမှု ၂-ခုအဖြစ် အာဏာ လက်လွတ်မည်နှင့် စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားများ လက်လွှတ်ရမည်ကို ရွံ့စိတ်ကို ရည်ညွှန်း ပြောကြားသည်။ ဂွမ်က အကြံပေးရာ၌ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များကို "သူတို့ အသက်ဆုံးရှုံးရမည် မဟုတ်ကြောင်း" အာမခံ ပေးနိုင်ပါက၊ စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားများ ဆက်ရှိမည်ဆိုပါက တဖြည်းဖြည်းချင်း အာဏာလက်လွှတ်ရန် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်များက စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် သူတို့ မိသားစုဝင် များအတွက် ပို၍အရေးပါပုံ ရသည်ဟု သူက ပြောသည်။ ဤအချက်များကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး၍ ရနိုင်ကြောင်း တာဝန်ခံက တုံ့ပြန်ပြီး ယခုပင် စဖို့ လိုသည်ဟု ထပ်ပြောသည်။ အကယ်၍ လူထု မကျေနပ်မှုကြီးလာပြီး ဆူပူမငြိမ်သက်မှုများ ဖြစ်ပွားလာပါက ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးစရာ ကျန်တော့မည်မဟုတ်ဟု သူက ဖြည့်စွက်ပြောသည်။
၅။ (ဂ) စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက သူတို့လမ်းပြမြေပုံအတိုင်း ဆက်သွားလိုကြောင်း ဂွမ်က ပြောသည်။ တာဝန် ခံက အကြံပြုရာတွင် ကျန်ရှိသည့်အဆင့်တိုင်း၌ လူအများကို ပို၍ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ပေးပြီး သူတို့လမ်းပြ မြေပုံအတိုင်း ဆက်သွားနိုင်ကြောင်း၊ ယခု လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ မူကြမ်းရေးဆွဲရေးအဆင့်၌ပင် ဆောင်ရွက်နိုင် ကြောင်း ပြောသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် လမ်းပြမြေပုံ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အချိန်ပိုယူရနိုင်သော်လည်း နောက် ဆုံး လူအများလက်ခံနိုင်သည့် ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာဖွယ် ရှိကြောင်း၊ အားလုံးအတွက် ကောင်းကြောင်း ပြော သည်။ လမ်းပြမြေပုံ လုပ်ငန်းစဉ်သည် လူအများ မြင်တွေ့လိုသော တည်ငြိမ်မှု ပေးနိုင်ဖွယ် မရှိကြောင်း တာဝန်ခံက ပြောသည်။ အကြောင်းမှာ ဒီမိုကရေစီရေး ထောက်ခံသူများနှင့် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ၏ လိုလားချက်များကို ထည့်သွင်းမထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယခင်အစည်းအဝေးတွင် သူဆွေးနွေးခဲ့သလို လမ်းပြမြေပုံလျင်မြန်အောင် ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် နာမည်ယူမည့်အစား ဤသို့ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု ပြောရာ ဂွမ်က သဘောတူကြောင်း ခေါင်းငြိမ့်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံက တည်ငြိမ်မှုကို မြင်တွေ့လိုကြောင်း ထပ်၍ ပြောကြားသည်။ တာဝန်ခံက ပြောရာတွင် လာမည့်လများတွင် ဆန္ဒပြပွဲများ ထပ်၍တွေ့ရဖွယ်ရှိကြောင်း၊ အမှန်တကယ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကို လူအများ မမြင်ရပါက ဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း ပြောသည်။ သူက ပြဿနာအများစုကို လွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်မှုရှိကြောင်း ပြောသည်။ အင်အားစု အများနှင့် စကားပြောရန်၊ ဆက်၍ ပြောရန်သာ လိုကြောင်း ပြောသည်။
၆။ (ဂ) သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် ရေနံ ရောင်းရငွေမှ ဘဏ္ဍာငွေ တိုးတက်ရရှိလာသော်လည်း မြန်မာ ပြည်သူများ ကောင်းကျိုးအတွက် စစ်အစိုးရက မည်သို့မျှ ဆောင်ရွက်မပေးခဲ့ကြောင်း ဂွမ်က အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဂြိုဟ်တုစလောင်းများအပေါ် အခကြေးငွေ များစွာမြှင့်တင်လိုက်သည့်အတွက် စစ်အစိုးရကို လူထုက နောက်ထပ်ပြဿနာရှာနိုင်ကြောင်းလည်း အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဤဆောင်ရွက်ချက်သည် လူများကို သတင်းဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သော်လည်း သူတို့ ထွက်ပေါက်ကလေးဖြစ်နေသည့် ဘောလုံးပွဲနှင့် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့်ပါ မထိတွေ့ရအောင် ပိတ်ပင်ရာ ကျကြောင်း တာဝန်ခံက ပြောသည်။ အစိုးရက အလွန်ဖိနှိပ်ရာ ကြိုးပမ်းလျှင် ပေါက်ကွဲတတ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံအနေနှင့် သင်ခန်းစာယူမိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆူပူမငြိမ်သက်မှု အန္တရာယ်ရှိနေကြောင်း သူနားလည်သည်ဟု ဂွမ်ကဆိုသည်။
၇။ (ဂ) ဂွမ်က လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပထမ ၁ဝ-နှစ်နှင့် ဦးနေဝင်း၏ ၁၉၈၈ က ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေး ကြိုးပမ်းခဲ့ပုံကို ကိုးကား၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ် အလုပ်ဖြစ်နိုင်မည်-မဖြစ်နိုင်မည်ကို မေးခွန်း ထုတ်သည်။ တာဝန်ခံက ရှင်းပြရာ၌ နိုင်ငံအများစုမှာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း အလားတူ လှုပ်ရှား ရုန်းကန်ခဲ့ရကြောင်း၊ ယခုလက်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်များသည်ပင် ၁၉၈၈ မှစ၍ ယခုတိုင် ပိတ်ဆို့ထားခဲ့သူများ ဖြစ် ကြောင်း သတိပေးပြောကြားသည်။ မြန်မာလူထုများအနေဖြင့် အတိတ်က သင်ခန်းစာယူပြီး သူတို့အနာ ဂတ်တွက် ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိပါက တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းလိုလိမ့်မည်ဟု တာဝန်ခံက ပြောကြားသည်။ ဂွမ် က အချို့သောပြဿနာများတွင် အပြင်က ဝင်ဆုံးဖြတ်ရန် မသင့်ဟု ပြောသည်။ ဥပမာ-မိသားစုတွင်းက လိင်ကိစ္စ ပြဿနာမျိုး ဖြစ်သည်။ တာဝန်ခံက သဘောတူပြီး ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များ၏ တာဝန်မှာ အင်အားစုများကို စကားပြောဆိုရန် တိုက်တွန်းရန်သာ ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စများ ဆွေးနွေးသည်၊ သဘောတူသည်မှာ သူတို့ကိစ္စသာ ဖြစ်သည်။ တာဝန်ခံက တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ပူးပေါင်း၍ အမှန်တကယ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ယခုပင် ဖြစ်မြောက်ရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ ပါတီအဖွဲ့အစည်းများမှ လူများ လက်ခံသည့် ရှေ့ဆက်သွားနိုင်သည့်လမ်း ထွက်ပေါ်လာသည့်တိုင် တိုက်တွန်းပေးဖို့ ပြောသည်။
ကြံ့ဖွံ့နှင့် တွေ့ပါ။ NLD နှင့် မတွေ့ပါနှင့်
၈။ (ဂ) တာဝန်ခံက မှတ်ချက်ပေးရာတွင် မကြာမီကလာသော တရုတ်ဧည့်သည်များ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း (စစ်အစိုးရ၏ လူထုအဖွဲ့အစည်း- USDA) နှင့်သာ များစွာ အချိန်ပေးသည်ဟု ပြောသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပင်မနိုင်ငံရေးပါတီ ၈-ခုအနက်မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိနှင့် ပြည်သူ့ ကွန်ဂရက်မှ ဟီ လူလီ (He Luli) ကို ဂွမ်က ဖော်ပြပြောဆိုသည်။ ဂွမ်က USDA အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီ တခုအဖြစ် ပြင်ဆင်နေသည်ဟု မယုံကြည်ကြောင်း ပြောသည်။ သူက မှတ်ချက်ပြုရာ၌ USDA တွင် အဖွဲ့ဝင် ၂၄ သန်းရှိပြီး ၆ဝ% မှာ အသက် ၁၈-နှစ်အောက် ဖြစ်သည်။ သို့အတွက်ကြောင့် မဲမပေးနိုင်ကြပါ။ တာဝန်ခံက ဂွမ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) နှင့် တွေ့နိုင်သလောဟု မေးသည်။ ဂွမ်က "အစိုးရက ခွင့်ပြုမည် မထင်ကြောင်း" မြန်မာအစိုးရကို ရည်ညွန်း၍ အမြန်ပြန်ဖြေသည်။
၉။ (ဂ) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက မိမိတို့ NLD နှင့် "များစွာ" တွေ့ဆုံခဲ့သည်ကို စောဒကတက်ကြောင်း တာဝန်ခံက ပြောသည်။ တရုတ်များကိုလည်း အလားတူ ပြောဆိုမှု ရှိ-မရှိ မေးသည်။ သူက ပြုံး၍ မရှိဟု ခေါင်းကို ယမ်းပြသည်။ NLD ထံသို့ တာဝန်ခံ သွားလည်ခဲ့သလားဟု မေးသည်။ သူက ရှိသည်ဟု ဖြေသည်။ သူက သံအမတ်ကြီးကို NLD အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောသည်။ သူက NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေထံမှ စာတစောင် လက်ခံရရှိဖူးကြောင်း၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့် တောင်းထားသော်လည်း မချိန်းဆိုရသေးကြောင်း၊ သို့သော်လည်း အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားတွင် တွေ့ဆုံစဉ်က လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖူး ကြောင်း ပြောသည်။ သူက မှတ်ချက်ပေးရာ၌ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် NLD နှင့် တာဝန်ခံတွေ့ဆုံ မှုကို ပိတ်ပင်တားဆီးမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ များစွာ မတွေ့ဆုံရန်သာ အကြံပေးကြောင်း ပြောသည်။ အစိုးရနှင့် မတူသည်မှာ NLD က မိမိတို့နှင့် တွေ့ဆုံစကားပြောလိုသောကြောင့် မိမိတို့ကလည်း ပုံမှန် တွေ့ဆုံနေကြောင်း တာဝန်ခံက ပြောသည်။ တရုတ်အရာရှိများက ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် (US) တာဝန်ခံနှင့် တွေ့ပါရန် အကြံပေးထားသည်ဟု ဂွမ်က ပြောသည်။ ဗိုလ်ချုပ် သန်းရွှေက တွေ့ပါမည်ဟု တရုတ် ဒု-နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို ဖြေဆိုခဲ့သည်။
၁ဝ။ (ဂ) မှတ်ချက်။ သန်းရွှေ စစ်အစိုးရ၏ လေးဖင့်နေမှုအပေါ် တရုတ်ကလည်း စိတ်ပျက်နေသည်မှာ အထင်အရှား ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ၊ ဆန္ဒပြပွဲများ၊ နိုင်ငံရေး တက်ကြွသူ သံဃာများကြောင့် သူတို့စိတ် မသက်မသာ ဖြစ်သော်လည်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက ဆွေးနွေးရန် ငြင်းဆန်နေသမျှ နောက်ထပ် မတည်ငြိမ် ဆူပူမှုများအန္တရာယ် တိုးလာနေကြောင်း သူတို့ သဘောပေါက်သည်။ ဤမတည်ငြိမ် ဆူပူမှုများသည် ဤနိုင်ငံတွင်းရှိ တရုတ် စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားကို မလွဲမရှောင်သာ ထိခိုက်စေမည် ဖြစ်သည်။ တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်မည်ဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံအရေး၌ မိမိတို့ ချဉ်းကပ်မှုဘက်သို့ ပို၍ နီးစပ်လာရန် ရှိသည်။ ဤနိုင်ငံတွင်းရှိ သူတို့အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်ရန် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကိုချည်း အားထားရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒီမိုကရေစီရေး ထောက်ခံသူများ အပါအဝင် အချို့ကြားခံအုပ်စုများကို ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဖြေထည့် သွင်း စဉ်းစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်သည်။ ဤဆွေးနွေးမှုများသည် ယခုပင် စတင်ရန် လိုအပ်နေ သည်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ သူတို့အနာဂတ်အတွက် စိုးရိမ်နေသည်မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ် မရှိပါ။ သို့အတွက် ကြောင့် တိတ်တဆိတ် ကာကွယ်မှုအတွက် အာမခံချက် ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးစားပွဲဝိုင်း သို့ ခေါ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံကလည်း သူတို့ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးစားပွဲဝိုင်းသို့ ခေါ်လာနိုင်စေ ရန် ဆန္ဒတူ ရှိနေသည်။ တရုတ်သံအမတ်ကြီးက မိမိတို့နှင့် ဆက်၍ လုပ်ကိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြသည်။
Here's Miley Cyrus Getting High
Miley Cyrus -- Partying withaBong
Uploaded by zembandi1. - News videos from around the world.
၁။ သခင်စိုး၊ ၂။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ၃။ သခင်သန်းထွန်း၊ ၄။ ကိုဗဟိန်း၊ ၅။ဗိုလ်လက်ျာ၊ ၆။ ဗိုလ်နေဝင်း၊ ၇။ သခင်ချစ်၊ ၈။ ကိုဗဆွေ၊၉။ ကိုကျော်ငြိမ်း -
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးမှု ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ထုတ်ပြန် နိုင်ငံတကာရှိ မဲပေးသူများထက် တစ်ခဲနက်မဲပေးခဲ့ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရ
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကို ကျင်းပပြီး တစ်လအကြာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ယခုကဲ့သို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၃၃၀ ရှိသည့်အနက် ၃၂၅ နယ်တွင်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၁၆၈တွင်လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ် ၂၉ ခု အပါအ၀င်) ၆၇၃ ရှိသည့်အနက် ၆၆၁ နယ်တွင်လည်းကောင်း ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကို ကျင်းပခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ကျင်းပခဲ့ရာ၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင် ခွင့်ရှိသူဦးရေ ၂၉ သန်းကျော် (၂၉၀၂၁၆၀၈ ဦး) ရှိပြီး ဆန္ဒမဲပေးသူဦးရေမှာ ၂၂ သန်းကျော် (၂၂၄၂၁၁၂၃ ဦး) ရှိကာ ဆန္ဒမဲပေးမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၇၇ ဒသမ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးရေ ၂၉ သန်းကျော် (၂၉၀၂၁၆၀၈ ဦး) ရှိပြီး ဆန္ဒမဲပေးသူဦးရေမှာ ၂၂သန်းကျော် (၂၂၂၈၃၄၆၅ ဦး) ရှိကာ ဆန္ဒမဲပေးမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၇၆ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်(တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအပါအ၀င်) အတွက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးရေ ၂၈ သန်းကျော် (၂၈၅၃၄၂၁၆ ဦး) ရှိပြီး ဆန္ဒမဲပေးသူဦးရေမှာ ၂၁ သန်းကျော် (၂၁၈၆၃၁၂၃ ဦး) ရှိကာ ဆန္ဒမဲပေးမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၇၆ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲပေးမှု ရာခိုင်နှုန်း ပမာဏနှင့် နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲများတွင် လာရောက်မဲပေးမှု ရာခိုင်နှုန်း ပမာဏကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ ကြည့်ပါက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် နိုင်ငံတကာ၌ ကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲများထက် မဲပေးသူများ တစ်ခဲနက်မဲပေးခဲ့ကြသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
ဒီမိုကရေစီအင်အားကြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗြိတိန်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့တွင် ကျင်းပခဲ့သောလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများ၌ လာရောက်မဲပေးမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်၊ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်သာရှိသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကျင်းပခဲ့သော လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများ၌ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေနှင့် မဲလာရောက်ပေးသူရာခိုင်နှုန်း
ခုနှစ် မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ မဲပေးခဲ့သူဦးရေ မဲပေးသူရာခိုင်နှုန်း
၁၉၉၀ ၁၂၁၁၀၅၆၃၀ ၆၇၈၅၉၁၈၉ ၅၆ ဒသမ ၀၃ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၉၂ ၁၃၃၈၂၁၁၇၈ ၁၀၄၄၀၅၁၅၅ ၇၈ ဒသမ ၀၂ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၉၄ ၁၃၀၂၉၂၈၂၂ ၇၅၁၀၅၈၆၀ ၅၇ ဒသမ ၆၄ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၉၆ ၁၄၆၂၁၁၉၆၀ ၉၆၄၅၆၃၄၅ ၆၅ ဒသမ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၉၈ ၁၄၁၈၅၀၅၅၈ ၇၃၁၁၇၀၂၂ ၅၁ ဒသမ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း
၂၀၀၀ ၁၅၆၄၂၁၃၁၁ ၉၉၇၃၈၃၈၃ ၆၃ ဒသမ ၇၆ ရာခိုင်နှုန်း
၂၀၀၂ ၁၆၂၉၉၃၃၁၅ ၇၃၈၄၄၅၂၆ ၄၅ ဒသမ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း
၂၀၀၄ ၁၇၇၂၆၅၀၃၀ ၁၂၁၈၆၂၃၂၉ ၆၈ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း
၂၀၀၆ ၁၇၂၈၀၅၀၀၆ ၈၂၁၂၁၄၁၁ ၄၇ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်း
အိန္ဒိယတွင်ကျင်းပခဲ့သော လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများ၌ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေနှင့် မဲလာရောက်ပေးသူ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၈၀ ၃၅၄၀၂၄၀၈၁ ၂၀၁၂၆၉၁၂၉ ၅၆ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၈၄ ၃၇၉၁၁၆၆၂၃ ၂၄၀၈၄၆၄၉၉ ၆၃ ဒသမ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၈၉ ၄၉၈၆၄၇၇၈၆ ၂၉၀၃၆၆၆၆၁ ၅၈ ဒသမ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၉၁ ၄၉၈၃၆၃၈၀၁ ၂၈၂၇၀၀၀၀၀ ၅၆ ဒသမ ၇၃ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၉၆ ၅၉၂၅၇၂၂၈၈ ၃၄၃၃၀၈၀၃၅ ၅၇ ဒသမ ၉၄ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၉၈ ၆၀၂၃၄၀၃၈၂ ၃၇၃၆၇၈၂၁၅ ၆၂ ဒသမ ၀၄ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၉၉ ၆၂၀၃၉၄၀၆၅ ၃၇၀၅၇၉၇၃၅ ၅၉ ဒသမ ၇၃ ရာခိုင်နှုန်း
၂၀၀၄ ၆၇၁၅၂၄၉၃၄ ၃၈၇၇၇၉၇၈၇ ၅၇ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း
ဗြိတိန်တွင် ကျင်းပခဲ့သော လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများ၌ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေနှင့် မဲလာရောက်ပေးသူ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၇၄ ၃၉၇၅၃၈၆၃ ၂၉၂၂၆၈၁၀ ၇၈ ဒသမ ၉၄ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၇၉ ၄၁၀၉၅၄၉၀ ၃၁၂၃၃၂၀၈ ၇၆ ဒသမ ၀၀ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၈၃ ၄၂၁၉၂၉၉၉ ၃၀၇၂၂၂၄၁ ၇၂ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်
၁၉၈၇ ၄၃၁၈၀၅၇၃ ၃၂၅၆၆၅၂၃ ၇၅ ဒသမ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၉၂ ၄၃၂၄၀၀၈၄ ၃၃၆၅၃၈၀၀ ၇၇ ဒသမ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်း
၁၉၉၇ ၄၃၇၈၄၅၅၉ ၃၁၂၈၉၀၉၇ ၇၁ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း
၂၀၀၁ ၄၄၄၀၃၂၃၈ ၂၆၃၆၅၁၉၂ ၅၉ ဒသမ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်း
၂၀၀၅ ၄၄၂၄၅၉၃၉ ၂၇၁၄၈၅၁၀ ၆၁ ဒသမ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်း
၂၀၁၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲပေးမှုရာခိုင်နှုန်း အများဆုံး မဲဆန္ဒနယ်များ
မဲဆန္ဒနယ် မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ မဲပေးခဲ့သူဦးရေ မဲပေးသူရာခိုင်နှုန်း
ဖရူဆို မဲဆန္ဒနယ် (၁) ၅၀၇၂ ၅၀၇၂ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း
ဖရူဆို မဲဆန္ဒနယ် (၂) ၅၁၇၄ ၅၁၇၄ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း
ရှားတော မဲဆန္ဒနယ် (၁) ၁၄၃ ၁၄၃ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း
ရှားတော မဲဆန္ဒနယ် (၂) ၁၆၈၀ ၁၆၈၀ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း
ပုလော မဲဆန္ဒနယ် (၂) ၂၉၄၅၂ ၂၉၄၁၉ ၉၉ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်း
ခေါင်လန်ဖူး မဲဆန္ဒနယ် (၂) ၃၄၉၄ ၃၄၈၆ ၉၉ ဒသမ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်း
တောင်ငူ မဲဆန္ဒနယ် (၁) ၇၆၅၃၅ ၇၆၂၀၄ ၉၉ ဒသမ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်း
ခေါင်လန်ဖူး မဲဆန္ဒနယ် ၆၆၀၂ ၆၅၇၃ ၉၉ ဒသမ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်း
ကယားပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် (၁၀) ၃၇၃၆ ၃၇၁၁ ၉၉ ဒသမ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း
ဇေယျာသီရိ မဲဆန္ဒနယ် ၆၄၅၂၂ ၆၃၆၅၃ ၉၈ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း
ပူတာအို မဲဆန္ဒနယ် (၂) ၁၆၂၃၃ ၁၅၉၇၉ ၉၈ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်း
လေရှီး မဲဆန္ဒနယ် (၂) ၃၈၄၈ ၃၇၈၄ ၉၈ ဒသမ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း
နောင်မွန်း မဲဆန္ဒနယ် ၃၉၁၉ ၃၈၃၈ ၉၇ ဒသမ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်း
နောင်မွန်း မဲဆန္ဒနယ် (၁) ၁၉၆၄ ၁၉၁၉ ၉၇ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်း
ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံ မဲဆန္ဒနယ် ၄၀၉၄၃ ၃၉၈၂၃ ၉၇ ဒသမ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း
ပူတာအို မဲဆန္ဒနယ် ၂၉၀၇၅ ၂၈၂၇၅ ၉၇ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားလူငယ် ဆုံညီ ပွဲတော်အဖွင်...
တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် သည်းညည်းခံနိုင်စိတ...
အေးမြမြ နှင်းစက်ထဲက ဘ၀ ရင်အပူများ
အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည့် အင်အားရှိဖို့လိုပါသည် ( တူေ...
တသိန်းလှူလည်းမများပါ ၊ ၁၀လှူလည်းမနဲပါ။ နဲများမဟူ၊ လှူ...